Uthi kushayeka bona kakhulu uma kuhlehliswe izimpi uMantengu - Impempe
Uthi kushayeka bona kakhulu uma kuhlehliswe izimpi uMantengu
May 19, 2021 May 19, 2021 Impempe.com
Ukhala ngendlala yezimpi, ukuxhashazwa abagqugquzeli bezimpi nokunganakekelwa kwabashayisibhakela eNingizimu Afrika, u-Innocent “Tycoon” Mantengu, ongumshayisibhakela waKwaZulu-Natal.
UMantengu, odabuka eMtuba eNyakatho nesifundazwe, uthi uyasiqonda isimo esibhekene nomhlaba wonke seCovid-19 kodwa okwaseNingizimu Afrika okuthinta amankomane kushiya imibuzo eminingi.
“ICovid-19 ingidalele izinkinga eziningi mfowethu. Impilo nje ibingasahambi kahle futhi singene ezindlekweni eziyisimanga,” kusho uMantengu osekunesikhathi agcina ukungena eringini.
“Abagqugquzeli kumele basukume bangqongqoze eminyangweni efanele ngoba imali iyaqhumuka. Akumele kulokhu kuhlehliswa izimpi manje ngoba siyalimala kakhulu njengabashayisibhakela.
“Abagqugquzeli abashayeki njengathi uma kuhlehla izimpi. Okungasenani uma kwenzeka lokho kumele sithole u-10% ukuze nathi sikwazi ukuphila. Phela siphila ngaso isibhakela.”
Lo mshayisibhakela uzobhekana noLuthando Mbumbulwane empini yebhande leWBA Pan African Junior Featherweight, elingaphethwe muntu, e-ICC Sandton Convention Centre, eGoli, ngoMeyi 28. Uthe wesabela ukuthi ingase ihlehliswe impi ngoba lokhu kuhlale kwenzeka.
“NangoDisemba 20 bekumele ngilwe kodwa impi yahlehliswa. Lokhu kwangiphatha kabuhlungu. Njengamanje ngiyajima kodwa angazi noma kuzothiwa impi isihlehlile yini.
“Njalo ngonyaka kumele uvuselele ilayisensi kodwa uthole ukuthi unyaka uyaphela golokoqo ungatholanga neyodwa impi. Uma ubeka uvo lwakho ngalokho kuthiwa uMantengu ukhulumela safuthi,” kuzikhalela uTycoon.
Ekhuluma ngempi yakhe noMbumbulwane uthe lo mshayisibhakela akamazi kodwa bazohlangana eringini kushunqe uthuli. “Ngizombona khona eringini ukuthi ulwa kanjani.
“Engikuthandayo nje ukuthi kukhona abantu abamnike inkinga kodwa mina ngibashayile. Nokho akusho ukuthi ngeke ngimhloniphe ngoba naye ungumshayisibhakela futhi kade ayelwa. Ngizomnika inhlonipho ayifanele,” kubeka uMantengu.
Ugcine ukungena eringini ngoSepthemba 29 ku-2019 empini eyayihlanganise amabhande, ele-ABU nelakuleli. Kuleyo mpi ushaywe ngu-Ayabonga Soncija wamephuca ibhande lakuleli.
“Ngaya kule mpi ngingaphilile, ngilimele eqolo. Okwenza ukuthi ngilwe khona nginjalo ukuthi ibhande lalizothathwa ukube angilwanga. Ngisamfuna eringini uSonjica ukuze sidelisane kahle ngingalimele, ngiwumqemane.
“Okwamanje ngibheke impi yangoLwesihlanu (Meyi 28) futhi ngiyilungele. Sisibenza kanzima ejimini noGatsheni (Samson Ndlovu) ongiqeqeshayo.” Uphethe ngokuthi ukuwina ngoMeyi 28 kuzomvulela amathuba amaningi.
Previous Previous post: Ivuke indlobane i-Arrows, yathela induku enzima kwiGalaxy
Next Next post: Ithole iphuzu elibalulekile iMaritzburg ibamba iCity